कोरियामा कुकुर तथा बिरालो आयात बढ्दो, २ बर्षयता आयात दोब्बर – Eps Sathi
September 22, 2021 457
दक्षिण कोरियामा पाल्नका लागि ल्याइने कुकुर तथा विरालोको आयाता बढिरहेको छ। यो बर्ष कोरियाले गत २ बर्षयताकै दोब्बर संख्यामा यि जनावर आयात गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। को’भि’डका कारण मानिसहरु घरमै बसेकाले फुरसदको समय पर्याप्त भएसँगै उनिहरुले घरमा जनावर पाल्न थालेका हुनसक्ने बताइएको छ।
कोरियाको क्षेत्रिय भन्सार कार्यालय इन्छनले बुधवार दिएको तथाङ्कअनुसार हवाई मार्ग हुँदै कोरिया ल्याइएका कुकुर तथा विरालाहरुको संख्या चालु बर्षको जनवरीदेखि अगष्टसम्म १० हजार २ सय ४१ पुगेको छ। राजधानी सउलबाट ४० किलोमिटर पश्चिममा रहेको इन्छन भन्सार कार्यलय कोरियाकै प्रमुख भन्सार कार्यालयमा पर्दछ।
यो बर्ष आयात गरिएको घरपालुवा जनावरहरुको संख्या गत २ बर्षयताकै दोब्बर हो। सन २०१९ को जनवरी देखि अगष्ट महिनाभित्रमा कोरियामा ५ हजार २ सय २२ कुकुर तथा विरालाहरु आयात गरिएको थियो। जसमा ४ हजार १ सय ६५ वटा कुकुर थिए भने १ हजार ५८ वटा विराला थिए। यो बर्षको संख्या गत बर्षको यसै अवधिको तुलनामा समेत १० प्रतिशतले बढेको हो। गत बर्ष कोरियमा ९ हजार २ सय ७० कुकुर विराला भित्रिएका थिए।
कोरियाको भन्सार कार्यालयका अनुसार यसरी घरपालुवा कुकुर विरालाहरुको संख्या बढ्नुको मुख्य कारण को’भिडका कारण सामाजिक दू’रीका नि’य’म पा’ल’ना गर्नुपरेपछि मानिसहरु घरभित्रै रहन पुग्नु हो। साथै घरमा यस्ता जनावरहरुलाई साथीका रुपमा समेत लिइने गरिएको छ। मानिसहरुलाई घरमै बस्नुपर्ने घरबाटै कामहरु गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि उनिहरुले घरपालुवा जनावर पाल्न थालेका हुन। कोरियाको कृषि, खाध्य तथा ग्रामिण मन्त्रालयका अनुसार अहिले कोरियामा ६३ लाख घरपरिवारले कुनै न कुनै घरपालुवा जनावर पालेका छन। यो संख्या गत बर्षको अक्टोबर महिनाभन्दा ४ लाख ७० हजारले बढेको हो। अहिले कोरियामा करिब ८६ लाख घरपालुवा कुकुर तथा विराला रहेको बताइएको छ।
Prevनिफ्राले गर्यो बोनस घोषणा, हेरौं कति दिने भयो बोनस?
Nextखुल्यो आजबाट साहस उर्जाको आइपिओ, कस्तो छ कम्पनी? कति कित्ता भर्दा ठिक?
अहिलेसम्म कोरियामा कतिले लगाए भ्याक्सिन? जानौं
आफ्नो बुबाको जन्मदिनमा फूल नफूलेपछि किम जोङ उनले गरे मालीलाई कारबाही